Howlgalka Millatariga Mareykanka ee Soomaaliya oo qaadan kara toddobo sano oo dheeraad ah – Warbixin - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Howlgalka Millatariga Mareykanka ee Soomaaliya oo qaadan kara toddobo sano oo dheeraad ah – Warbixin
April 15, 2019 at 07:22 Howlgalka Millatariga Mareykanka ee Soomaaliya oo qaadan kara toddobo sano oo dheeraad ah – Warbixin2019-04-15T07:22:08+01:00 WARARKA SOOMAALIYA
Saraakiisha difaaca Mareykanka ayaa ku qiyaasaya in ololaha millatari ee Washington ee Soomaaliya ay qaadan karto toddobo sano si ay u dhamaystiraan, warbixin cusub ayaa soo baxday, maalmo ka dib markii madaxweyne Donald Trump uu kordhiyay howlgalka Pentagon ee la dagaallanka argagaxisada ee Geeska Afrika.
Taliska ciidamada Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada AMISOM ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya ay ku guuleysteen inay la wareegaan gacan ku heynta magaalada Muqdisho.
Kooxda xagjirka ah ayaa dhowaan ku xoog badatay bartamaha Soomaaliya, iyaga oo fulinaya weerarro ka dhan ah xukuumadda, millatariga iyo bartilmaameedyada rayidka ee caasimadda, Muqdisho, iyo sidoo kale magaalooyinka gobolka.
Afhayeen u hadlay Pentagon ayaa sheegay in ciidamadooda ay sii joogi doonaan gudaha dalka Soomaaliya si ay uga hortagaan falalka argagaxisada ah ee ka dhanka ah argagaxisada. iyada oo istiraatiijiyadda Maraykanka ee la-dagaallanka argagixisannimada ee Soomaaliya ay u sheegtay CNN Sabtidii.
“Haddii wax walba ay shaqeynayaan, hase yeeshee mucjisooyin badan ayaa ku socda si ay taasi u dhacaan, si dhakhso ah ayay u socotaa, wayna sii socon kartaa,” ayaa lagu yiri war saxaafadeedka. Sarkaal kale oo ka tirsan Wasaaradda Gaashaandhiga Mareykanka ayaa sidoo kale u sheegay CNN in howlgalka Maraykanku “laga yaabo inaan la dhameeyn ilaa 2026-ka.”
Trump ayaa todobaadkan saxiixay hannaan madax-bannaan si uu u kordhiyo cadeynta madaxweynaha ee xaalad deg deg ah oo ku saabsan Soomaaliya sanad kale, taasoo ka dhigaysa in xagjirnimada sii kordheysa ee waddanka Afrika ay tahay “khatar aan caadi aheyn oo khatar ah” Maraykanka.
Horraantii toddobaadkan, Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayr ayaa u safray Washington si uu ugala xaajoodo iskaashiga milatari iyo arrimo badan oo kala duwan oo lala yeeshay La taliyaha Ammaanka Qaranka ee Mareykanka John Bolton iyo saraakiil kale oo sare oo Mareykan ah, oo ay ka mid yihiin Xoghayaha Difaaca ee David Norquist iyo David Hale, xoghayaha hoose arrimaha siyaasadda.
Marka laga soo tago ololaha millatari ee Mareykanka ee waddankiisa, ayuu Khaire sheegay in xisaabtiisii ​​twitter-ka “dib u soo kabashada dhaqaalaha” iyo “horumarinta dibuhabaynta dhinaca ammaanka” ay ka mid yihiin arrimo kale oo muhiim ah oo laga wada hadlay.
Xigasho: Press TV
« Hordhac: Watford Vs Arsenal: Gunners Oo Aan Shabaqeeda ilaashan Kulamada Ay Martida Tahay Premeir league Xilli Ciyaareedkan
Real Madrid Oo Si Lama Filaan Ah Ugu Dhaqaaqaysa Xiddig Lala Xiriirinayo Kooxaha Reer Manchester, Premier League Ayuu Joogaa »